Mitabataba daholo amin’ny "délestage". Kanefa, raha mba nametraka izay vaha-olana takany i raFanja, dia mimenomenona daholo indray : "fa maninona no thermique, ahoana ny solika amin’io, mitabataba be ilay groupe, iza no mahazo tombony @ vidin-tsolika sns...". Kanefa, hanaiky ny hiaritra ve isika mianakavy raha toa ka tohana mpamokatra herin’aratra ("barrage hydroélectrique") no namboarina, ka mety afaka roa na telo taona any aoriana any vao nivaha ny resaka "délestage" ?
Mitabataba daholo amin’ny làlana ratsy. Kanefa raha mba manamboatra amin’ny andro atoandro i raFanja, dia mimenomenona daholo indray : "fa manina koa izao raha mba natao amin’ny alina ny fanamboarana fa maha be embotaka ? ". Dia rehefa manamboatra amin’ny alina i raFanja, dia mivazavaza daholo indray ny manodidina : "tsy misy hatoriana e !!!".
Mitabataba daholo fa tsy manome vola ny fiarahamonina iraisampirenena ("communauté internationale"). Kanefa rehefa misy vola mivoaka avy amin’ny Union européenne, FMI, Banque mondiale, Banque africaine, vazaha, sinoa, japoney, karana sns, dia mimenomenona daholo indray : "inona foana ary ity trosa lavareny ity ? Manao toetran’androrosy...". Dia maro no mahita volana alohan’i Habib : "Io izao dia lany mission, consultants, fividianana fiara... fa tsy miantraiky any amin’ny mponina mivantana". Asa loatra, angamba rehefa manome vola ny FMI, dia ny fanirian’ny sasany hoe alahatra etsy amin’ny biraony daholo ny Malagasy 22 tapitrisa dia mba mahazo raviny (ravim-bola an) kely avy daholo, izay vao ho afa-po.
Mitabataba daholo fa maloto ny tanàna, voretra, mikorotana. Kanefa rehefa mba misy lamina apetrak’i raFanja ka hampiarina ny lalàna, dia mimenomenona daholo indray ... "jadona e... tsy rariny e...".
Mitabataba daholo fa be loatra ny seminera, ny atrikasa, ny fikaonan-doha. Kanefa rehefa misy zavatra tsy mety na tsy ampy fandrindrana, dia mimenomenona daholo indray. "Tsy mazava ny fizarana andraikitra e... Misy tsy manao ny asany... Tsy mety izao". Ary tsy maintsy misy "rôle" foana eo manazava fa raha izy no nanao an’io an, dia "aoka fotsiny".
Nitabataba daholo ny mpandeha tamin’ny RN4 fa mangozohozo mitady hidaraboka ny tetezana. Kanefa raha mba nanamboatra i raFanja, dia mimenomenona daholo indray : "fa maninona no adiny roa isan’andro ihany no sokafana ny làlana mandritra ny fanamboarana e... tsy mahay miasa... maninona raha atao amin’ny alina".
Mitabataba daholo fa miparitaka ny "sachet" plastika, izay fantatra fa hisy fiantraikany ratsy amin’ny tontolo iainana any aoriana any, satria manentsina ny lalan-drano. Kanefa, rehefa mandrara i raFanja dia mimenomenona daholo indray ... "resaka sachet ve no atao lahara-pahamehana... Fanjakana tsy misy atao".
Mitabataba daholo amin’ny toetran’ny vahiny izay lazaina fa manjakazaka eto an-toerana. Fa firy amintsika no mikiribiby mandefa zaza any amin’ny Lycée français, "écoles holomoguées", na any andafy mihitsy aza ? Firy amintsika no mizesta ery fa tany Frantsa no niala-sasatra ? Firy amintsika no manonofy ahita vady vazaha, ary manao izay afaka mba ahatanteraka izany ? Firy amintsika no tsy miantsena raha tsy Scorrre, tsy mijery raha tsy CanalSat, tsy mamaky raha tsy lahantsoratra amin’ny teny frantsay, ary miandrandra mafy ny ahita asa amin’ny "projet" na "organisme international" ?
Ekena fa tsy dia mahomby loatra ny mpitantana, nanomboka tamin’ny 1960 ka hatramin’izao. Fa mila sahy miaiky koa isika vahoaka fa misy lesoka goavana. Tsy hoe miaro an’i raFanja aho, fa misy aretin-tsaina mikiky toa ny "schizophrénie" ihany angamba isika, ary miseho izany n’iza n’iza mitondra eo. Zistoara sy jeografia ihany ity raharam-pirenena ity ka.
Raha mandeha tsara daholo ny fiainan’ny tsirairay isam-batan’olona dia tsy hitabataba araka ny voalazanao ny valala be mandry. Fa misy zavatra tsy manjary ao matoa izy tsy mety mangina. Fomba ahoana tokoa moa no hahafahanao hangina raha mbola maro amin’ny mpiara-belona aminao (92%) no miaina ambany "fenitry ny fahadiranovana" (seuil de pauvreté) ? Sa mitampina ny masonao angamba ka mety kokoa aminao y mangina eo anatrehan’izany tarehin-java-misy iainana isan’andro eto izany. Ka hoy aho hoe adala angamba ianao...
Miray hevitra @nao aho ry Ndimby, vavany daholo isika eto na ambony na ambany fa tsy te-haniky mihitsy hoe misy asa tokony hataon’ny rehetra aloha vao "tsara daholo ny fiainan’ny tsirairay isam-batan’olona" (dixit Liberty).
Enga isika mbola hanana A Ndimby hahita izany dia ny valiny "angamba" : sitrana ny aretina mikiky.
"... mitabataba aza izao no misy..." :
Rajaonarimampianina, filoha mampiesona. Iles éparses TSIAHY
"Izao tontolo izao marary avokoa"( Les Adelines) ka noho izany tsy isika malagasy ihany no tia MITABATABA rehefa tsy faly na kivy amin’ny tsy mety afitsokin’ny Mpitondra ! Raha manaraka ny vaovao eran-tany isika isan’andro dia maheno foana fa mihetsika ny Mpiasa , ny Mpianatra , ny Mponina etsy sy eroa ! Milahatra an-dalambé ka matetika dia voadaroka aza ka misy maratra sy voasambotra ??!!
Madagascar. Gendarmes torturing student 1 Sept 2015
ce qui est envahissant c’est le tapage, les moyens mobilisés, pour une réunion "gadget"
Mitabataba daholo amin’ny "francophonie" ?
comme si "mon" petit hexagone représentait l’avenir des nécessaire échanges de Madagascar avec l’étranger, plutôt que l’Inde, la Malaisie, la Chine, etc
nrooooooo ! il fut un temps où les Malagasy vivaient dans le "moramora" sauf que justement , le "moramora" ne colle plus , maintenant , on a besoin de "mitabataba" parce que rien ne va plus.
"PS . Aleo ihany mamaky ny mpanoratra amin’ny teny frantsay fa tsy mbola mahatratra ny lentany amin’izany ny fanoratany ny tenin-drazana".
Ny tena tetika androany dia ny fijerena raha mahaliana ny olona ny matoandahantsoratra amin’ny teny Malagasy, eny na dia tsy dia avo lenta loatra aza, ka tsy mahafa-po tanteraka anao na izaho."
Caro sy Ndimby "
Ny "francophonie" dia fanandevozana ara- tsaina
Tsy sasatra mihitsy izaho mamerina mamaky an’ity "Aretina mikiky" n’i Ndimby ity sy ny hevitra maro amin’ny teny Malagasy . Tsoriko fa ny tenako manokana dia taty aoriana be vao nianatra nanoratra ny tenintsika ary mbola mikezaka mianatra azy foana hatramizao ...
Amiko dia ilaina no mifanakalo hevitra amin’ny teny Malagasy dia mangina tsy mitabataba eto intsony ireo vahiny na vazaha manaratsy gasy lava izao !! " Vazaha lany mofo" , hoy ny fiteny taloha ary tadidio mandrakariva koa fa misy ny" Vazaha mody miady" hiaro ny tombontsoany fotsiny ?!
Ny hitondranao ny resaka hoe rehefa "légitime" (légitime araka ny fahitanao azy, fa matoa voadaka tamin’ny ambava-fony i Rajoelina t@ réaction ny opposition teto sy ny communauté internationale dia tsy légitime loatra izany) ny coup d’état dia tsy coup d’etat izany. Lasa géométrie variable ny siansa raha izany.
Fa ireo mpitondra azo atao hoe tena "leader" no ilaina amin’izao fotoana izao, mitondra sy mamohy amin’ny toerana nokatsaina ahatongavana, na misy rivo-doza, na havandra, na onja masiaka, mba ho fanatsarana sy fanondrotana ny malagasy.
" Na inona atao, na inona. Na inona koa tsy atao, na inona. Dia tsy maintsy MISY foana ny mahita tombon-tsoa amin’izany, sady tsy maintsy misy koa anefa ny voasembatsembana ny amin’izany ihany."
Toutes les espérances du pouvoir colonial, qui avait trouvé cette idée de faire venir des Karana et avait appliqué ces mesures de préférence "karanesque", étaient très largement dépassées.
"Dommage que vous-même vous ne preniez pas la plume plus souvent, ou que vous n’ayez pu à ce jour regrouper autour de vous des éditorialistes de votre qualité pour aborder tous les sujets de société."
Hoy ilay hiran’i Poopy izay hoe "Tsy mety afa-po raolombelona". Izay no mampitabataba azy, ary tsy ny Malagasy ihany tsy akory no manao an’io. Izao tontolo izao marary avokoa hoy i Adeline momba izay.
Iza anefa no homen-tsiny ? Tsy misy afatsy ireo mpifidy nametraka ireo olona ireo teo amin’izany toerana izany ihany. Raha olona tsy nahay nitondra ny tokantranony ohatra ka nisara-panambadiana no asainao mitondra firenena dia hanantena inona eo ianao ? Ny ankohonana no rafi-piaraha-monina sy rafi-pitondrana kely indrindra ary ny fitambaran’ireny no mamorona ny firenena. Raha io kely indrindra io aza tsy hainy ny mifehy azy dia inona no andrasanao ho vitany eo ? Mety masiaka izany teniko izany ary ialako tsiny ialako fondro raha misy tafintohina. Fampiasa talohaloha teo tamin’ny resaka lalàna anefa ilay fiteny hoe "en bon père de famille" ilazana olona mahay miaina sy mahay mitantana. Apetrako eo iny aloha.
Fanamarihana kely momba ny fanoratra ny teny "lalana" sy "lalàna" : Ny "lalana" andehanana dia tsy misy tsindrim-peo fa ny "lalàna" tokony hajaina ihany no misy tsindrim-peo. Toy izany koa ny teny hoe "tanana" sy ny "tanàna".
Ireo nosy kely "Iles éparses " izao no tena vonton’antom-baovao .I Rajao toa tena mangina tokoa ,mody fanina satria mbola miandry vola fanampiana ,sy hanao fitsangantsanganana any ivelany etsy sy eroa ,....